Gịnị bụ MarTech? Technology Technology: Gara aga, Ugbu a, na Ọdịnihu | Martech Zone
Nwere ike ị nweta otu chuckle si m dee ihe edemede na MarTech mgbe bipụtara ihe karịrị 6,000 isiokwu na teknụzụ ahịa ihe karịrị afọ 16 (karịa afọ blog a… M nọ na blogger gara aga). Ekwenyere m na ọ bara uru na-ebipụta ma na-enyere ndị ọkachamara azụmaahịa aka ịghọta ihe MarTech bụ, bụ, na ọdịnihu nke ihe ọ ga-abụ.
Nke mbụ, n'ezie, bụ nke ahụ Nwachukwu bụ a ọdụ ụgbọ mmiri nke ahia na teknụzụ. Agbaghara m ohere dị ukwuu iji wepụta okwu ahụ… M na-eji AhịaTech ruo ọtụtụ afọ tupu m degharịa saịtị m mgbe m gachara Nwachukwu e nakweere ụlọ ọrụ-dum.
Amaghị m onye dere okwu ahụ kpọmkwem, mana enwere m nnukwu nkwanye ùgwù maka Scott Brinker bụ onye bụ isi ihe na-ewere okwu ahụ bụ isi. Scott mara ihe karịa m… ọ hapụrụ otu leta wee hapụ ụyọkọ.
Martech metụtara isi atumatu, mbọ, na ngwaọrụ ndị na-ejikọ teknụzụ iji nweta ebumnuche na ebumnuche ahịa.
Onye edemede Scott Brinker
Nke a bụ nnukwu vidiyo nke ndị enyi m Isi nke atọ nke na-enye nkọwa dị mkpirikpi ma dị mfe nke vidiyo Gịnị bụ Martech:
Iji nye nnyocha, achọrọ m itinye ihe m kwuru na:
Akụkọ banyere MarTech: MarTech gara aga
Ala nke MarTech: MarTech Ugbu a
Okirikiri ala MarTech
Kedu ihe bụ MarTech Stack?
Kedụ ka MarTech si gafee ọrụ data azụmaahịa?
Kedu ka MarTech si emetụta ndị ahịa na nkà ha dị mkpa?
Kedu ka MarTech si nweta ahịa?
Ọdịnihu nke MarTech: Ọdịnihu MarTech
MarTech: Gara aga
Anyị na-echekarị banyere MarTech taa dịka azịza sitere na Ntanetị. M ga-arụ ụka na nkà na ụzụ na-ere ahịa n'onwe ya gafere tupu okwu taa. Na mbido 2000s, a na m enyere ụlọ ọrụ aka dịka New York Times na Toronto Globe and Mail iwu ụlọ nkwakọba data terabyte na-eji ọtụtụ wepụ, mgbanwe, na ibu (ETL) ngwaọrụ. Anyị jikọtara data azụmahịa, data igwe mmadụ, data obodo, na ọtụtụ isi mmalite ndị ọzọ yana iji sistemụ ndị a jụọ, zipu, akara, ma tụọ mgbasa ozi mbipụta, nyocha ekwentị na ozi mkpọsa ozi.
Maka ibipụta akwụkwọ, arụrụ m ọrụ na akwụkwọ akụkọ n'oge na-adịghị anya ha si na ndị na-eduga ndu na-arụ ọrụ na efere arụ ọrụ nke nwere mmetụta na-ere ọkụ n'ime ha na-eji oriọna mbụ na ihe ndị na-adịghị mma, wee kọwaa kọmpụta na enyo. Agara m ụlọ akwụkwọ ndị ahụ (na Mountain View) wee rụzie akụrụngwa ahụ. Usoro site na imepụta iji bipụta bụ nke dijitalụ entirely na anyị bụ ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ izizi ịkwaga eriri iji bugharịa faịlụ faịlụ buru ibu (nke ka dị okpukpu abụọ nke mkpebi dị elu nke taa). E wepụtara ihe anyị rụpụtara na ntanetị… wee banye na igwe obibi akwụkwọ.
Ngwá ọrụ ndị a bụ ihe ịtụnanya dị egwu na teknụzụ anyị dị n'akụkụ ọbara ọgbụgba. Ngwaọrụ ndị a abụghị igwe ojii ma ọ bụ SaaS n'oge ahụ… mana m rụrụ ọrụ na ụfọdụ ụdị nke websaịtị mbụ nke sistemụ ndị ahụ, na-etinye data GIS iji kpuchie data ụlọ ma wuo mkpọsa. Anyị si na satellite na-enyefe data na ntanetị anụ ahụ, na eriri intranet, na ịntanetị. Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, na sistemụ na teknụzụ niile ahụ m rụrụ ọrụ ugbu a bụ igwe ojii na ịnabata web, email, mgbasa ozi, na teknụzụ ahịa mkpanaka iji soro ndị mmadụ kwukọrịta.
Ihe anyị enweghi mgbe ahụ iji gaa n'igwe ojii site na ngwọta ndị ahụ bụ nchekwa dị ọnụ, bandwidth, ebe nchekwa, yana ike ngụkọta. Site na ụgwọ nke ndị sava na-agbada na bandwidth skyrocketing, Software dị ka a Service (SaaS) a mụrụ… anyị elebeghị anya n'azụ! N'ezie, ndị na-azụ ahịa anabatabeghị web, email, na ekwentị mkpanaaka n'oge ahụ… ya mere e zigara anyị nsonaazụ anyị site na ndị na-agbasa ozi na-agbasa ozi, na mbipụta, na ozi ezipụ. E kewasịrị ha ekewapụ na ahaziri iche.
M otu oge nọdụrụ na Executive si Ajụjụ ọnụ ebe o kwuru, “Anyị ihu ọma mepụtakwara digital ahịa…” na m chịrị ọchị n'olu dara ụda. Atụmatụ ndị anyị na-etinye taa agbatịwo ma dị mfe karịa mgbe m bụ nwata na-ahụ maka teknụzụ, mana ka anyị doo anya na usoro, usoro, na omume nke ịbuga ahịa ọkaibe mere ọtụtụ afọ tupu ụlọ ọrụ ọ bụla enwee ịntanetị. Offọdụ n'ime anyị (ee, mụ…) nọ ebe ahụ mgbe anyị na-arụ ọrụ na mkpọsa site na mainframe… ma ọ bụ mepe windo sava na ebe ọrụ anyị. Maka gị ndị na-eto eto… nke ahụ bụ isi igwe-oji na-agba ọsọ n'ime ụlọ ọrụ gị ebe ọnụ gị / ebe ọrụ gị bụ ihe nchọgharị na nchekwa niile na ike mgbakọ nọ na sava ahụ.
MarTech: Ugbu a
Ndị ụlọ ọrụ na-adịru njikwa mmekọrịta ndị ahịa, mgbasa ozi, njikwa ihe omume, ahịa ahịa, njikwa ahụmịhe onye ọrụ, elekọta mmadụ media ahịa, njikwa aha, email ahịa, ahịa efu (weebụ, ngwa ọdịnala, na SMS), akpaaka ahia, njikwa data njikwa, data buru ibu, nchịkọta, ecommerce, mmekọrịta ọhaneze, nkwado ahịa, na ọchụchọ ahịa. Ahụmahụ ọhụrụ na abụrụ teknụzụ dị ka eziokwu augmented, eziokwu dị adị, eziokwu agwakọtara, ọgụgụ isi, nhazi asụsụ okike, na ndị ọzọ na-achọta ụzọ ha dị na nyiwe ọhụụ.
Amaghị m otú Scott na-agbaso ya, mana ọ na-achọpụta ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ a ihe karịrị afọ iri… na taa MarTech odida obodo nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ 8,000 na ya.
Ọ bụ ezie na Scott ngalaba nkewa ahụ dabere na ibu ọrụ ahịa, ahịrị ndị ahụ na-agbadata ntakịrị n'ihe gbasara nyiwe na ihe bụ isi ha nwere. Ndị na-ere ahịa na-agbakọta ma jikọta nyiwe ndị a dịka ọ dị mkpa iji wuo, mepụta, ma tụọ mgbasa ozi ahịa maka nnweta, mgbagha, na ijide ndị ahịa. Nke a collection nke nyiwe na ha integrations mara dị ka Uche MarTech.
A Uche MarTech bụ nchịkọta nke sistemụ na nyiwe nke ndị ahịa na-eji nyocha, ịkọwapụta, mezuo, bulie ma tụọ usoro ahịa ha n'oge njem ịzụ ahịa nke atụmanya yana site na ndụ ndị ahịa.
Otu Martech Stack na-ejikọtakarị nyiwe SaaS nke ikikere yana ngwakọta nke igwe ojii iji mepụta data dị mkpa iji nye ihe niile dị mkpa iji kwado mbọ ahịa ụlọ ọrụ ahụ. Taa, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ọrụ MarTech Stacks na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ, ụlọ ọrụ na-etinye oge dị ukwuu na mmepe maka njikọta na ndị ọrụ ka na-ewu ma na-etinye mkpọsa ahịa ha.
MarTech gbasaa n'ofe ahia
Anyị na-amata na mmekọrịta ọ bụla na atụmanya ma ọ bụ onye ahịa na-emetụta mbọ ahịa anyị. Ma ọ bụ a ahịa mkpesa na-elekọta mmadụ media, a ọrụ nkwụsị, ma ọ bụ nsogbu na-achọta ozi world na a na-elekọta mmadụ media ụwa, ahịa ahụmahụ ugbu a bụ ihe na-akpata na-akpata mmetụta nke anyị ahịa mgbalị na anyị n'ozuzu aha. N'ihi nke a, MarTech na-agbasa karịa ọrụ ahịa ma ugbu a na-etinye ọrụ ndị ahịa, ahịa, ajụjụ, na data ojiji ịkpọ aha ole na ole.
Companieslọ ọrụ ụlọ ọrụ dịka Salesforce, Adobe, Oracle, SAP, na Microsoft nke na-ewu obere na iberibe na MarTech ohere na-enweta ụlọ ọrụ na ngwa ngwa, na-etinye ha, ma na-anwa ịmepụta nyiwe nke nwere ike ịrụ ọrụ ndị ahịa ha site na mmalite ruo na njedebe. Ọ dị imerime. Ijikọta ọtụtụ igwe ojii na Salesforce, dịka ọmụmaatụ, chọrọ ndị mmekọ Salesforce nwere ahụmahụ nke mere ya maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Mbugharị, mmejuputa, na ijikọ sistemụ ndị ahụ nwere ike were ọnwa ọnwa… ma ọ bụ ọbụ afọ. Ihe mgbaru ọsọ nke ndị na-enye SaaS bụ ịnọgide na-eme ka mmekọrịta ha na ndị ahịa ha na-eto eto ma nye ha ezigbo ngwọta.
Olee Otú O Si Emetụta Ndị Ahịa?
Iji kwado MarTech, onye na-ere ahịa taa na-abụkarị ihe okike, nyocha, na nka na ụzụ iji merie njedebe na ihe ịma aka nke ọtụtụ teknụzụ azụmaahịa chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa email ga-enwe nchegbu maka akụrụngwa ngalaba maka nnweta nnweta nnabata, ịdị ọcha data maka listi email, ihe okike iji wuo ngwa nkwukọrịta dị ịtụnanya, ikike idetu ederede maka ịmepụta ọdịnaya nke na-eme ka onye debanyere aha rụọ ọrụ, ikike nyocha maka ịkọwa ntụgharị na ntụgharị. data, na… nzuzo na-enye ahụmịhe na-agbanwe agbanwe gafee ọtụtụ ozi email na ụdị ngwaọrụ. Yikes… nke ahụ bụ ezigbo talent dị mkpa… na nke ahụ bụ email.
Ndị na-ere ahịa taa ga-abụrịrị ihe enyemaka dị egwu, ihe okike, ihe dị jụụ na mgbanwe, ma ghọta etu esi akọwa data. Ha kwesiri ị atta ntị na nzaghachi ndị ahịa, nsogbu ndị ahịa, ndị na-asọmpi ha, na ntinye aka na ndị ahịa ha. Na enweghị otu n’ime ogidi ndị a, o yikarịrị ka ha na-arụ ọrụ ọghọm. Ma obu, ha kwesiri ịdabere na ihe ndi ozo nke puru inyere ha aka. Nke ahụ abụwo ọrụ na-enye m ezigbo ego n'afọ iri gara aga!
Kedu ka O siri emetụta Ahịa?
A na - ebunye MarTech taa iji chịkọta data, mepee ndị na-ege ntị, na-ekwurịta okwu na ndị ahịa, na-eme atụmatụ na kesaa ọdịnaya, mata ma na-ebute ụzọ ụzọ, nyochaa aha aha, ma soro ego na itinye aka na mkpọsa n'ofe ọ bụla na ọwa… gụnyere ọwa ahịa ahịa ọdịnala. Ma ọ bụ ezie na ụfọdụ channelụ ọdịnala ọdịnala nwere ike itinye koodu QR ma ọ bụ njikọ nwere ike ịdabere na ya, ụfọdụ ọwa ọdịnala dị ka bọọdụ mkpọsa na-agbakọ ma mejupụta.
Ọ ga-amasị m ịkọwa na ahịa taa dị ọkaibe karịa afọ ole na ole gara aga… na-enye ozi dị mkpa na nke dị mkpa nke ndị ahịa na azụmaahịa nabatara. M ga-agha ụgha. Ahịa taa bụ nke enweghị ọmịiko ọ bụla nye ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa ndị ozi na-ebute. Ka m na-anọdụ ala ebe a, enwere m ozi ịntanetị 4,000 na-agụghị akwụkwọ yana ana m ewepu aha site na ọtụtụ ndepụta nke m na-abanye na-enweghị ikike m kwa ụbọchị.
Ọ bụ ezie na mmụta igwe na ọgụgụ isi na-enyere anyị aka ịkekọrịta nke ọma ma hazie ozi anyị, ụlọ ọrụ na-ebugharị azịza ndị a, na-achịkọta ọtụtụ narị isi data nke ndị na-azụ ahịa amaghị, na - kama ịdebe ozi ha nke ọma - na-atụba ha. ozi ndị ọzọ.
Ọ dị ka ọnụ ahịa dijitalụ dị ọnụ ala karịa, ka ndị ọzọ na-ere ahịa SPAM ihe nzuzu nke ndị na-ege ha ntị ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi n'akụkụ ọwa niile ha nwere ike ịchọta iji tụọ atụmanya ha ebe ọ bụla anya mmiri ha na-awagharị.
Nleghara anya nke MarTech na-enweta azụmahịa, ọ bụ ezie. Ndị ahịa na-achọkwu na nzuzo, na-egbochi ọkwa, na-ekwusi ike na SPAM n'ụzọ siri ike, na-etinye adreesị ozi-e nwa oge na nke abụọ. Anyị na-ahụ ihe nchọgharị ịmalite igbochi kuki, ngwaọrụ mkpanaka na-egbochi nsuso, na nyiwe na-emepe ikikere data ha ka ndị ahịa wee nwee ike ijikwa data enwetara ma jiri ha.
N’ụzọ dị ịtụnanya, ana m ekiri ụfọdụ ọwa ahịa azụmaahịa na-alaghachi azụ. Otu onye mụ na ya na-arụ ọrụ nke ọma CRM na usoro mgbasa ozi na-ahụwanye uto na ọnụọgụ nzaghachi ka mma site na mmemme ozi na-ebupute. Ọ bụ ezie na igbe akwụkwọ ozi gị dị oke ọnụ karịa ịbanye, enweghị mkpụrụ 4,000 SPAM na ya!
Innovation na teknụzụ ịzụ ahịa dijitalụ na-agbasawanye dị ka ntọala na teknụzụ na-eme ka ọ dịrị mfe iwu, ijikọta, na ijikwa nyiwe. Mgbe m chere ihu na etinye ọtụtụ puku dollar kwa ọnwa na onye na-eweta email maka mbipụta m, enwere m ihe ọmụma na nka zuru oke nke mụ na enyi m wuru engine nke anyị. Ọ na-efu ego ole na ole n'otu ọnwa. Ekwenyere m na nke a bụ usoro MarTech ọzọ.
Ọnọdụ nyiwe na enweghị koodu nọ na ịrị elu ugbu a, na-enyere ndị na-abụghị ndị mmepe aka n'ezie wee wulite ma dozie usoro nke aka ha na-edeghị otu akara koodu. N'otu oge, usoro ntanetị ọhụụ na-apụta kwa ụbọchị yana atụmatụ na ikike karịrị akarị nke na-efu ọtụtụ iri puku dollar iji mejuputa. Ọ na-afụ m ụfụ site na usoro ịzụ ahịa ecommerce dị ka Klaviyo, Moosend, na Omnisend, ọmụmaatụ. Enwere m ike iwebata ma wuo njem dị mgbagwoju anya nke mere ka ndị ahịa m nwee ọnụọgụ abụọ n'ime otu ụbọchị. A sị na m rụrụ ọrụ na usoro ụlọ ọrụ, nke ahụ ga-ewe ọtụtụ ọnwa.
Customerschọ ndị ahịa na-abụ ihe ịma aka, mana ahụmịhe ndị ahịa na-enweta dị ka Jebbit na-enye ndị mara mma, ahụmịhe ọrụ onwe ha maka ndị na-azụ ahịa ịnyagharịa ụzọ nke aka ha ma chụpụ onwe ha gaa na ntugharị… niile na kuki kuki nke mbụ nwere ike ịchekwa ma lelee. Agha nke kuki ndị ọzọ kwesịrị itinye ihe na Facebook pixel (nke ahụ bụ ihe m kwenyere na ezigbo ihe kpatara Google ji ahapụ ya) yabụ Facebook agaghị enwe ike soro onye ọ bụla na Facebook. Nke ahụ nwere ike belata Facebook si ọkaibe ezubere iche… na ike dịkwuo Google si ahịa òkè.
Amamịghe echiche na nyiwe nchịkọta dị elu na-enyere aka ịnyekwuo nghọta na mbọ ahịa ahịa ahịa ọ bụla na mmetụta ha na njem ịzụ ahịa zuru oke. Nke ahụ bụ ozi ọma maka ụlọ ọrụ ndị ka na-akọ isi ha ebe ha ga-etinye ike ha niile iji nweta ndị ahịa ọhụụ.
Adịghị m onye na-abịa n'ihu, mana enwere m obi ike na sistemụ anyị nwere ọgụgụ isi ga-enweta na ịnwekwu ngwa ngwa anyị nwere ike itinye n'ọrụ anyị ndị a na-ekwughachi, na ndị ọkachamara n'ahịa nwere ike iwepụta oge ebe a kacha jiri ha kpọrọ ihe - n'ịzụlite ihe okike na ahụmịhe ọhụụ nke ahụ na-eme ka itinye aka na inye uru maka atụmanya na ndị ahịa. Enwere m olileanya na ọ na-enye m ikike ndị a:
Nweta - Ikike ịghọta etu ahịa na ahịa ọ bụla m na-eme na-esi emetụta ndị ahịa, njigide ndị ahịa ha na nnweta ha.
Real-Time Data - Ikike ịlele ọrụ na ezigbo oge kama ichere ruo ọtụtụ awa ma ọ bụ ụbọchị iji kpokọta akụkọ kwesịrị ekwesị iji hụ ma bulie mbọ ahịa ndị ahịa m.
Nlele ogo 360 - Ikike ịhụ mmekọrịta ọ bụla na atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa ka ijere ha ozi nke ọma, soro ha kwukọrịta, ghọta ha ma nye ha uru.
Omni-Ọwa - Ikike ịgwa onye ahịa okwu n’ajụjụ ma ọ bụ ọwa ha chọrọ ka agwa ha site na sistemụ nke m nwere ike ịrụ ọrụ n’ime ya.
ọgụgụ isi - Ikike ịgafe echiche nke aka m dị ka onye na-ere ahịa ma nwee sistemụ nke na-ekewapụta, na-ahazi ma mezuo ozi ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị maka ezigbo onye ahịa m.
Ọ ga-amasị m ịnụ echiche gị na nzaghachi na Martech: Gara aga, Ugbu a, na Ọdịnihu. M kuliri ya ma ọ bụ ka m pụọ? Dabere na azụmaahịa gị, ọkaibe gị, yana akụ gị, enwere m n'aka na nghọta gị nwere ike ịdị iche na nke m. Aga m arụ ọrụ n'isiokwu a kwa ọnwa ma ọ bụ karịa iji debe ya ruo ụbọchị… Enwere m olileanya na ọ na-enyere aka ịkọwa ụlọ ọrụ a dị ịtụnanya!
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iso Martech, biko denye aha na akwụkwọ akụkọ m na Podcast m! You'll ga-ahụ ụdị na njikọ na n'okpuru maka abụọ.
Tags: mgbasa oziAnalyticsnnukwu datacontent Marketingnjikwa mmekọrịta ndị ahịaecommerceemail Marketingnjikwa ihe omumeakụrụngwa ahịanjikwa data ahiateknụzụ ahịankataMartech akụkọ ihe mere ememwekota orumartech tojupụtaraahịa efummekọrịta ọhanezenjikwa ahaNkwado ire ahịascott brinkerASMSSocial Media Marketingnjikwa njirimara njirimaraihe bụ martech
Loop & Tie: B2B Enyemaka Onyinye Bụ Ugbu A Ahịa Salesforce Na AppExchange Market
Swarmify: Ebumnuche Anaghị Eji YouTube Embbed Video Na weebụsaịtị Gị